२०७७ फाल्गुण ९ आइतबार १०:०१:००
चीन सरकारले गत ३० डिसेम्बरमा खोप ७९ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको जनाएको थियो
नेपाल सरकारले सिनोफार्मको सहयोगमा बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्टले निर्माण गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन भेरो सेल ल्याउन अनुमति दिएको छ । सरकारले आपत्कालीन प्रयोगका लागि ५ फागुनमा सिनोफार्मको भ्याक्सिनलाई अनुमति दिएको हो ।
चीनबाहेक अर्जेन्टिना, पेरु, इजिप्ट, मोरक्कोलगायतका १० वटा देशमा यो भ्याक्सिन प्रयोग भइरहेको छ । नेपालमा पनि औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएसँगै चीन सरकारले पाँच लाख डोज भ्याक्सिन सहयोगस्वरूप दिने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार आपत्कालीन प्रयोगका लागि स्वीकृत भए पनि चीन सरकारले दिने भ्याक्सिन कहिलेसम्म नेपाल आइपुग्छ भन्ने यकिन भएको छैन ।
यो भ्याक्सिन नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि कोभिसिल्डपछि मान्यता दिइएको दोस्रो खोप हो । यसअघि भारत सरकारको सहयोगमा अक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेकाबाट निर्मित कोभिसिल्ड भ्याक्सिन १० लाख डोज ल्याएर प्रयोग भइरहेको छ । जसबाट हालसम्म तीन लाख ८३ हजार तीन सय ९८ जनाले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन् । ‘भेरो सेल’ भ्याक्सिनबाट करिब दुई लाख ५० हजारलाई खोप दिन सकिन्छ ।
हाल प्रयोगमा भइरहेको एस्ट्राजेनेकाको खोप सुरक्षित, सामान्य तापक्रममा राख्न मिल्ने र कम मूल्य पर्ने हुँदा थप भ्याक्सिन किन्ने तयारी सरकारले गरिसकेको छ । साथै, सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को ‘कोभ्याक्सिन परियोजना’ बाट २२ लाख ५६ हजार डोज भ्याक्सिन ल्याउने योजना पनि छ । यो भ्याक्सिन दुईदेखि तीन चरणमा ल्याइनेछ ।
नेपालमा प्रयोगका लागि अनुमति पाएको दोस्रो भ्याक्सिन ‘भेरो सेल’ पनि सुरक्षित रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रकाशित भएका विभिन्न अध्ययनअनुसार सिनोफार्मको भ्याक्सिन प्रभावकारी देखिन्छ । यो भ्याक्सिन चीनमा मात्रै एक करोडभन्दा बढीले लगाइसकेका छन् ।
कस्तो छ भेरो सेल ?
सिनोफार्मअन्तर्गतको भ्याक्सिन भेरो सेल निष्क्रिय भाइरसमा आधारित छ । भेरो सेल तीन चरणमा क्लिनिकल ट्रायल भइसकेको छ । चीन सरकारले गत ३० डिसेम्बरमा खोप ७९ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको जनाएको थियो । यस्तै, युएईमा भएको क्लिनिकल ट्रायलमा यो भ्याक्सिन ८६ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको थियो ।
#कोरोना भाइरस # चिनियाँ भ्याक्सिन
साउदी जान दैनिक सयौँ भारतीय नेपालमा, स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्दा जोखिम बढ्दै
कोरोना भाइरस पुरानो हो कि नयाँ भेरियन्ट ? देश अझै अन्योलमा, भेरियन्ट छुट्याउने करोड–करोडका ६ मेसिन प्रयोगविहीन
ओलीले विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट, नयाँ गठबन्धन अझै अस्पष्ट